ကာကွယ်ဆေးနှင့် ခရီးသွားဆေးပညာဌာန - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
၆၆ (၀) ၂၇၁၁-၈၇၄၂-၃
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဆိုတာ အသက်တွေကို ကယ်တင်နိုင်တဲ့၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စရိတ်တွေကို လျော့နည်းစေနိုင်မယ့်၊ သိသာပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်မှုတွေ အဆင်မပြေမှုတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မယ့် အင်မတန်မှပဲ ရိုးရှင်းလှတဲ့ ဆောင်ရွက်မှုလေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ ကိုယ်ခန္ဓာကို ပဋိပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတစ်မျိုးကို ခုခံအားရှိဖို့ တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။ လူကြီးမင်းနဲ့ လူကြီးမင်းရဲ့ ကလေးတွေ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ကူညီရုံသာမကပဲ ကိုယ့်အနီးအနားက တစ်ခြားလူတွေကိုပါ မကူးစက်စေဖို့ ရှောင်ကျဉ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးနှင့် ခရီးသွားဆေးပညာဌာနဟာ လူနာတွေကို ရောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ ရောဂါခုခံနိုင်စွမ်းအကြောင်းတွေကို ပညာပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ တကယ်လို့ လူကြီးမင်းအနေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က တစ်ခြားမတူညီတဲ့ ဒေသတစ်ခုခုကို ခရီးသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုရင် လူကြီးမင်းမှာ အရင်ကတည်းက ခုခံနိုင်စွမ်း မရှိထားတဲ့ တိုင်းပြည်အလိုက် ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားမိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ထိုင်းလူမျိုးတွေအပြင် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လာရောက်အခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားတွေကို ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းနဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ ခရီးတစ်ခုမထွက်ခင် ဘယ်လို ကျန်းမာရေးပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လို ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကို လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို လူကြီးမင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ တီဘီရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါ၊ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ၊ ခွေးရူးရောဂါနဲ့ အခြားနာမကျန်းဖြစ်မှုတွေအတွက် ကုသခြင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
JCI အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ Samitivej ဆေးရုံကြီးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဒီဆေးခန်းဟာ အပြစ်ပြောဖွယ်မရှိတဲ့ သန့်ရှင်းမှု အဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ခေတ်အမီဆုံး နောက်ဆုံးပေါ် ပစ္စည်းကိရိယာတွေ သုံးတဲ့အပြင် လူကြီးမင်းအား ရောဂါကူးစက်မှုက ကာကွယ်ဖို့အတွက် အထူးလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ လက်မှတ်ရ သမားတော်ကြီးများနဲ့ သူနာပြုများကို ခေါ်ယူခန့်ထားပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးလူကြီးများနှင့် အန္တရာယ်ရှိသောသူများအတွက် ဆွေးနွေအကြံပေးခြင်း၀န်ဆောင်မှု
ခရီးမသွားမီနှင့် သွားပြီးနောက် ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်း၀န်ဆောင်မှုနှင့် ရောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
တီဘီရောဂါအတွက် PPD စစ်ဆေးမှု
ခွေးရူးပြန်ရောဂါရှိသော တိရိစာၦန်များနှင့် ထိတွေ့ထားသော သို့မဟုတ် အကိုက်ခံထားရသော သူများအတွက် ကုသခြင်း၊ ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ
ရောဂါများနှင့် နောက်နောင်တွင် ထိတွေ့မည့် အန္တရာယ်ရှိသည့် လူများအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်း (Pre-exposure prophylaxis)
ခန္ဓာကိုယ်၏ ရောဂါခုခံအားအဆင့်ကို ကာကွယ်ဆေးမထိုးမီ စစ်ဆေးရန် သွေးစစ်ခြင်း
၆၆ (၀) ၂၃၇၈-၉၀၈၅
Natavudh Townamchai, M.D.
Asst.prof.tanom Bunaprasert, M.D.
Hanphong Fakthongpun, M.D.
Pakorn Bunsakulsopit, M.D.
Siripong Tantasethi, M.D.
Suchana Sithongsuraphana, M.D.